ingxelo: imiba kuba improvement - IVIDIYO INCOKO. Dating-intanethi!
Kwi ephikisana, i-ngamandla kwaye tedious yesitalato exertion ka-mental umsebenzi, apho excites kwaye ugcina uthatha ixesha elide.
Akukho gumbi kuba theoretical debates, profiling iimfazwe, okanye blah-blah thetha ibonisa.
Endaweni yoko, ngu kakhulu personal, yamkela, welcoming, kwaye humorous atmosphere. Akukho otyebileyo okumnandi kodidi oluphezulu kunye elinesihlanu iintlobo iti kwaye sandwiches. Isidlo sasemini at restaurant. Akukho indawo yokusebenzela apho awuyazi into ungayenza ngokwahlukileyo. Endaweni yoko, rhoqo slings, amaqela ofundo-nzulu, ukuba banqwenela, a coaching ifowuni kunye nam. Hayi enkulu iqela, kwezinye iimeko, wena nabanye kufuneka sihlale cwaka. Kodwa encinane iqela ukuva ukuba abanye kanjalo kuhlanganisa kunye thatha ivula. Nayiphi na igadi ukuba sele grown ngokuhamba kwexesha, ukuba ufuna ukuhlala ixesha elide, ixesha akusebenzi zikhathalele kuyo.
Le yinyaniso komyezo we eyakho uthando.
Kodwa yintoni i-fertilizer kuba ukukhula kwaye ngobuninzi ka-iintyatyambo, ngokubambisana. Umtshato ufumana i-azame ukusombulula iingxaki ka-couples yedwa, woody Allen akazange kuthi.
I-irony a ibinzana phambi kokuba unako kubonakala lies largely yakhe inyaniso.
Ngenxa yokuba ngendlela eyahlukileyo ifomu budlelwane, njani lwahlulelwano kuba Union, unoxanduva ngoko ke interdependent.
Hayi nje uthando, kodwa kanjalo yezimali, amalungiselelo, abantwana kunye collective ubomi nemigaqo yokusebenzisa imichiza enxulumene apho uhlala khona, zakho ezikhethekileyo ukuzonwabisa ukwenza vala makhoboka.
Ke kufana a satisfying udibaniso, hayi i-ankle crunch ukuba kufuneka ibe waphila ngokuthi, izinto ezininzi kufuneka kube kunye, lixoxiwe kwaye wavuma phezu. Ngelishwa, kwendoda nomfazi, abo bakholisa kuba ngokupheleleyo opposite opinions, kufuneka xoxa isihloko se budlelwane nabanye. Abafazi ukuba: Njengoko ixesha elide, njengokuba nathi baqhubekeke ukuthetha malunga yonke into, nkqu kunzima imiba, njengoko ixesha elide njengoko zethu ubudlelwane phakathi ingaba ngocwangco. Amadoda, kwi ephikisana, cinga: ke ukuba bathethe malunga yonke into kwaye ngaphezulu, siya kuvuma, kodwa kwingxelo oku akunjalo kwi-siseko. Oku kwaba easiest kwi Kasolusapho okanye matriarchal budlelwane. Indoda okanye umfazi sele egqibe. Wacela a motive, ndaba ukuba ngenxa ndithetha, okanye ngenxa yokuba ndiya kuba imali ekhaya kwaye ndiya kuzisa ngokwaneleyo. Kwi-partnerships, abanye abantu ngokuzenzekelayo kuba ngaphezulu amalungelo ngaphezu kwabanye. Zombini bayalingana kwaye ngoko ke, kufuneka sibe xoxa kakhulu kwaye ukufumana isisombululo, kunye ubomi kunye kubo. Inani ii-odolo luyafuneka okanye xa ikhaphethi iqala. Yintoni kwaye kangakanani ufuna ukuchitha. Ukuba umntwana iimfuno Nutella ukuba badle, ukuba tofu kungcono kunokuba steak.
Kodwa nkqu xa zonke ezi i-satisfactory yolungiselelo imiba ingaba kugqitywe, omnye umbuzo obalulekileyo ihlala: ubudlelwane ye-ezimbalwa ngokwayo.
Kwi-infatuation icala, kuphela closeness kwaye closeness kwenzeka xa bobabini ziyabonakala. Kwiminyaka embalwa kamva, yonke into eyahlukileyo.
Banako ke kamsinya thatha ithuba indawo proximity kwaye mutual enciphisayo, impixano, kwaye umgama.
Kodwa ingaba uyakwazi okulungileyo malube kwenzeka ngale ndlela? Kwi hetalia ngeposi yi-Barry Davenport, mna ukufunda kwi ezi amane imibuzo. Mna ukufumana kwabo ngoko ke okulungileyo ukuze ndibe nje iguqulelwe kwabo kuwe.
Xa ufika ekhaya evela emsebenzini, hamba phezu into ofuna kuba ngokwakho, yintoni ndithi okanye ingaba lokuqala imizuzu embalwa.
Singathini worry malunga yethu ifuna ukuba sikulungele ukwenza into kwi ezahlukeneyo mini? Yintoni eyahlukileyo traits kunjalo, kukho iingxaki phakathi kwethu. Yintoni ilizwi lam kwaye wam unxibelelwano isimbo ukuyizisa kuni, ufuna ukuchitha ixesha ixesha kunye nam. Yintoni wena bazimisele ukwenza nam okanye kuba kum, into yokuba akazange yakho iklasi kwixesha elidlulileyo budlelwane. Remembering, mhlawumbi xa ufunda. Umdla Ewe, intetho yakho lover kuqala, argue ukuba uyakwazi qinisekisa yintoni umlingane wakho ukukuthetha. Kukho akukho imiba ngezimvo phakathi ucango kwaye hinge. Kwaye nkqu ukuba umlingane wakho ufumana ukudinwa kwaye nervous evela emsebenzini. Kungcono hayi rush.
Endaweni ikofu, iti, okanye amanzi
Mhlawumbi ndingathanda recommend kwi dialogue, ukususela mna vumela couples ukucacisa okanye komeleza zabo budlelwane.
Apha kanye umgaqo-nkqubo kuba ezimbalwa okanye kunzima couples, ndine webinar.
Le yi free online indawo yokusebenzela apho unako irejista, kwaye ninike ebalulekileyo iziphakamiso kuba yakho ezimbalwa. Ngoko uyakwazi ukuqeqesha kunye nam Nabo. Apho, ndiya kukunceda chaza kwaye sebenza isihloko, yakho budlelwane. IIND: Ukuba ufuna liked eli nqaku, nceda undixelele ukuba yintoni ndiza ecela ngaphezulu: ngomhla we-Facebook, Itwitter, okanye idilesi ye-imeyili. okanye ubhale amagqabantshintshi. okanye ukuzibophelela entsha iindaba nge-imeyili okanye RSS. Abaninzi abafundi abeza okokuqala malunga eli nqaku kwi-bam hetalia personality, nazi ezinye ngakumbi ethandwa kakhulu wagqitywa, ukuba begin: imiqondiso lo mbhodamo, ubudlelwane phakathi impendulo a bunzima, ubudlelane bunzima, ingqwalasela kubudlelwane ngemiba lo mbhodamo, ubudlelwane mbhodamo ka-cwaka, ubudlelwane bunzima ukuba ekuncedeni ukuziphatha ngendlela budlelwane bunzima, ubudlelane bunzima, umlawuli, ubudlelwane ka-lo mbhodamo ukuya okanye hlala, ubudlelane bunzima, couples therapy, ubudlelane bunzima, ukugcina ubudlelane budlelwane mbhodamo ka-okunokukhethwa kuko, budlelwane mbhodamo iincam, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelwane ye-bunzima, i-ubunzulu bunzima, ubudlelwane mbhodamo le isenza, ubudlelane ka-mbhodamo woloyiso budlelwane, ukuziphatha kwe lo mbhodamo, ubudlelwane bunzima ukuba enze budlelwane bunzima, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelwane phakathi bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze, ubudlelane bunzima, into omawuyenze ubudlelwane phakathi bunzima, into omawuyenze xa iziphakamiso kunye neendlela tshintsha, owenza izinto tshintsha. Oku nokungabikho guidebooks.
Wam-e-mail izifundo, yonke into eyahlukileyo.
Wonke zimbalwa zidlulileyo, uza kufumana i-imeyili apha: nge PDF ifayile eziliqela amaphepha kwaye i-ukumiselwa msebenzi. Kwaye baya kuhamba lula. Ngenxa yokuba siyazi ukuba kwiintsuku ezimbalwa, elandelayo ileta iya safika. Mna usoloko ucinga ngayo ukuba tantric massage uqeqesho. Oko andinaku kwenzakalisa, Tantra, ukwazi amandla bomzimba kwi-ubunzulu kwaye yaba kunye nabo. Ukuba elandelayo ezimbalwa ufuna ukushiya kwaye ufuna ukuqonda ezinye ezimbalwa ke umzimba, ngoko ke Tantra uqeqesho massage ngu ngokuqinisekileyo kuluncedo. Boyfriend yam kwaye mna ingaba ngoku abahlala elide-umgama budlelwane kwaye ungathanda ukufunda okungakumbi malunga nemibandela (email). Ndibuze umbuzo hayi kuphela ukuqonda oko yena thinks kum, kodwa kanjalo ucinga ukuba yena kusenokwenzeka unxibelelwano. Ndiyathemba i-zombane Ulawulo inkqubo akuthethi ukuba get kakhulu nxenye zisebenza eluthulini kwithuba elide kakhulu. Kwaye molo rajone, inxalenye imixholo, oko kukuthi ngaphandle ekuphuculeni ngesondo ubomi, ngu ezilungele kuba ngamanye amaxesha amaninzi budlelwane nabanye. Imibuzo ingaba nzulu kakhulu kwezinye amanqaku kwaye yiya iselwa ukuza kuthi ga ngoku kwi vase. Mhlekazi ezinye abahlobo, ndine elicetyiswayo oku, kwaye ndim komhlaba ukwazi ukuba yintoni into entsha. Njengoko kuba kum, mna ube ujonge ukukhuphela, neatly kwi electronics, iincwadi, suitcases, ngoko ke musa get nxenye zisebenza eluthulini, mna kufuneka zange kobu bomi. Kodwa ke, kulo naliphi na ityala, ndinguye kakuhle equipped Ah enye into, le mibuzo ingaba ezilungele, ngamanye amaxesha ngocoselelo kancinane ifomu, kuba ngamanye amaxesha amaninzi budlelwane nabanye, kwaye ndim okulungileyo ngenxa yam ukumiselwa kwebandla, ukuba akunjalo kuba perception yomfanekiso kwezinye reflections. Kanjalo kuba coaching, apho ndinako umsebenzi hypothetically. Imibulelo emininzi kuba epheleleyo-fledged hetalia kunye ngoko ke, abaninzi exabisekileyo impulses kuba nam. Ewe, umfazi wam kwaye mna balingwe yokuqala elishumi imibuzo. Ukususela ngale ntsasa, ndifuna i-apartment kwakhona. Ewe, kwakukho imibuzo phakathi kwethu, kwaye thina bamangaliswa ukuba eminyaka kamva sasivuya ngxi encountering omtsha ifomu. Ndiyabulela kuba fascinating inqaku kwaye uguqulelo umbuzo malunga budlelwane nabanye - le nyani into ethile. Kufuneka sele balingwe ngaphandle imibuzo kunye yintoni isiphumo.
Egqithileyo-aggressive impendulo ithi ukuziphatha abantu abaninzi.
Yintoni ngasemva oku? Kwenzeka njani ukuba uqwalasele olu ukuziphatha kwangaphambili. Lokubhala lokuqala interactions kunye omtsha powerlessness kunye nemvakalelo enxulumene ne-kubalulekile risky. Ngenxa akekho adapt ngokwayo ukuba umoya ixesha ngakumbi unlimited ngaphezu kwayo glorifies feasibility. Yintoni genetic Babes kancinane umyalezo. Nkqu nokuba ndiza ziphakathi, andikho omnye wabo, kodwa oku kwaba lokuqala lonikezelo wam coaching abaxhasi. Esi isivakalisi onayo kum ukucinga, ngenxa eminyaka phambi Studio funda ukuba ukuthabatheka ingaba imiqondiso ka-OCD. Idla baya imigca ethe i-bridge ka-izimvo, frightening izimvo, okanye aggressive impulses kwiintlanganiso iziqu zabo okanye kwabanye. Ezi obsessive iingcinga ndinenza oxhalabileyo kwaye scared. Kunye eyona imbi kwi indawo yoluntu, uza ngokukhawuleza ukufumana acquainted kunye selfish Yandex abantu ke Iphepha: Pushing motorists kwi highway kunye flashing ezongeziweyo.
Cyclists, musa ukuyeka kwi ezindleleni.
Travelers, Obsessive-compulsive isiphithiphithi - ezenzeka chronic kwaye elide mental ukugula, i-uncontrolled umntu, ukuqhubeka iingcinga(ukuthabatheka) kwaye behaviors (ukuthabatheka) waziva urgency, ngaphandle kokuba iisemina ezaqhutywayo ngokuchanekileyo. iindlela okanye personal iisemina. Kwaye yintoni eyona kunikela mzuzu ezilungele kuba ngumqeshwa. Bekuya kuba coaching kulo naliphi na ityala hayi ngcono kunokuba kwindawo yokusebenzela. Kunye ezi ngxaki, ukususela sino phantse akukho nto ulawulo, sidinga ngakumbi trust."Ndabona ukuba ndinga ukuba, ukuba ndandisoyika ukuba iphaphazela, kwaye yiyo mna zange flew.Ewe,"wathi i-nomonde."Kwaye ngenxa ndinguye kwi-bam obubobakhe, ndine undergone ngaphezu kwesinye rehabilitation. Oku kanjalo kubo abantu abo sebenza amaphulo angama-a icala abalindi ngasesangweni. Funda malunga wam amava apha kwaye malunga zintathu izinto.
Dating site kuba ezinzima qinisekisa ividiyo Dating site free umfazi ifuna ukuya kuhlangana ads ividiyo ukuncokola nge-girls ubhaliso ividiyo fun kuba abantwana ividiyo Dating nge-girls zonke phezu kwehlabathi eyona incoko roulette apho ukufumana acquainted i-intanethi incoko kunye kubekho inkqubela